Njani Ukwazi a kubekho inkqubela: Amanyathelo (Illustrated)
Omnye eyona imiba ekubeni a guy ngu ukufumana ukwazi a kubekho inkqubela. Wonk ubani kwezabo techniques, kodwa kufuneka wenze ntoni imisebenzi engcono. Awukwazi ukuqikelela ixesha xa kufuneka babe kuhlangana ilungelo omnye, ngoko ke nokuzilungiselela. Eli nqaku ngu gonna ukufundisa kangakanani. Omnye eyona imiba ekubeni a guy ngu ukufumana ukwazi a kubekho inkqubela. Wonk ubani kwezabo techniques, kodwa kufuneka wenze ntoni na imisebenzi engcono. Awukwazi ukuqikelela ixesha xa kufuneka babe kuhlangana ilungelo omnye, ngoko ke nokuzilungiselela. Eli nqaku ngu gonna ukufundisa kangakanani. Yiya kwi-gym, kwi-ibhola yomthi alley okanye nayiphi na enye indawo ukuba unqwenela ukuya kwi-enjalo indlela ukuba, xa kufuneka ahlangane a kubekho inkqubela, uza sele unayo into ngokufanayo. Nkqu ukuba, njenge nani, wenziwe etsaliweyo ukuba concert ka-Justin Beber yakhe abancinane udade, nibe get a laugh kunye. Laughing ngu enkulu, indlela ukuba aphule umkhenkce. Musa ukubeka kakhulu kakhulu perfume, kwaye ingabi wear iingubo ukuba ingaba overly trendy. Kuba affordable kwaye hayi kakhulu aggressive. Ukuseka visual, qhagamshelana, kodwa kunye moderation. Ukuba kufuneka uqaphele ukuba besela efanayo beer, sottolinealo. Ukuba lowo wakhe i shirt ye concert yakho ncwadi lamasoldati, ubeke ngayo ubungqina. Shyness babe dlala yakho ukuthandwa, kodwa musa ukuvumela ukuba kuthintela kwenu ukususela uthetha nge kubekho inkqubela.
Abantu bamele nervous ngenxa yokuba worry malunga yintoni itno siye ekunene. Kugxininisa kuphela ngomhla langoku mzuzu kwaye uza kolwalwa. I ibar kwaye clubs asingabo namanani iindawo ukuhlangabezana girls uphawu. Nibe kuhlangana umntu ethanda kuba ubudlelwane kunye nawe, kodwa kunzima ngakumbi sifuna ukwenza jikelele encounters. Ukuba osikhangelayo a kubekho inkqubela ukuba ikho nabazali bakho, jonga oko phezulu ebandleni, ngezifundo, restaurant okanye amusement park.
Honesty ngu-eyona nkqubo
Bonke girls kufuneka ahlangane ingaba enokwenzeka girlfriends, apho liqala nge ekunene futhi, enye indlela nge enyanisekileyo umntu. Musa ukuxoka malunga yakho ubudala, abantwana benu, imoto, umsebenzi kwaye bomtshato. Kubalulekile preferable ukuba fumana ekuqaleni ukuba awenzanga nto kuyo nedolophu, kunokuba kuphulukana nayo ezixabisekileyo ixesha. Phakathi kwezinye izinto, akunjalo kubekho inkqubela uza kuthatha yenzala kuwe kuba njani ingaba ngenene, hayi kuba yakho imathiriyali izinto. Basenokuba enkulu, indlela ukuba aphule umkhenkce, okanye jika ngaphandle ukuba kubakho intlekele, kwaye kwangoko nokulungiselela kunye eventualities. Asingabo bonke ngabo funny njengoko Vince Vaughn. Zama hayi compliment kakhulu kakhulu njenge ‘unengxaki enkulu ncuma kwaye i-ngamandla gaze’. Ngabo, ozolisayo, kodwa ke eqhelekileyo ukuba bekuya kuba ngcono ukuba opt kuba into engalindelekanga njenge, ‘Kufuneka i-irresistible perfume’, ‘Ngaba kuba mnandi iinwele’ okanye ‘ndithanda yakho outfit, suits kwenu, ngenene’. Ukuba ungathanda ‘inkosi Imimiselo’, esiza emva. Kanjalo ukufunda comics ngu elihle. Kuba ngokwakho nakwi-kuza yi-ngokwayo. Ukuba ungathanda isebenza outdoors, okanye ukudlala emidlalo, lowo uyaqhuba ukwenza njalo kwaye uza kuhlangana ilungelo umntu. Ingaba i-tidy, ndiyakuthanda cook, okanye inxaxheba entertainment iziganeko nosapho lwakho rhoqo ngeveki. Aba ngabo bonke okulungileyo qualities kuba i kubekho inkqubela, njengoko baye babonise ukuba ufuna mna-reliant kwaye mature. Ukuba umhlobo wakho kumenywa ukuba i-concert okanye ukubona ifilim ukuba ngokuqhelekileyo musa ungathanda, yiya phaya. Nawe zange ndiyazi ukuba ngubani uza kuhlangana. Musa ukuxoka malunga yakho yokwenene intentions, ingakumbi ekuqaleni. Ukuba ukhe ubene hayi ikhangela a ezinzima budlelwane, hayi ukuba uthi ukuba ezintandathu. Awukwazi invent stories nje ukutsala ingqalelo yakhe. Inyaniso iya ngaphezulu kwaye kungcono ukuba abe honest. Hayi kuba kakhulu aggressive, ukuba awufuni ukunika impression yokuba a stalker. Prestale emamele, khumbula isitshixo amanqaku into yena uthi kwaye bathethe malunga ngokwakho ngaphandle exaggerating. Ingaba i-rehearsals kunye umhlobo ka-zezenu. Kungcono ukuba ufuna ukunika wena thabatha ingxelo, kunokuba tshisa ngokwakho nge kubekho inkqubela kwindlela kawonke-wonke
← Indlela kuhlangana a guy ka-proven tips for a ngezixhobo ezahlukeneyo girls - "Uthando Iincam"